ကျွန်မ ကစားထားတဲ့ flash လေးပါ
မင်းညိုကို ပြကြည့်တော့ သူက သြဘာပေးပါတယ်
နင်က အရွယ်မရောက်သေးဘူး..ကလေးကျင့် ကလေးကြံ ကြံတုန်း..တဲ့
သီချင်းထည့်ဖို့ စဉ်းစားတော့ ကော်မပီတဲ့ မြန်မာသံစစ်စစ်ကိုပဲ ထည့်ချင်တယ်
လူစုမိကြပြီး ကိုယ့်ဘာသာသီချင်း ဆိုပြကြတဲ့အချိန်တွေဆို ခေတ်သီချင်းတွေ မဆိုရဲဘူး..
ကိုယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ နောက်က သူ့စကားနဲ့ သူ့သီချင်း လိုက်ဆိုကြမှာတွေက အပြည့်လေ…
အဲလို သူငယ်ချင်းတွေ စုမိပြီး မင်းတို့ မြန်မာသီချင်းဆိုကွာ ဆိုရင် ဒီသီချင်းက မျက်နှာပွင့်တယ်..
ဒါနဲ့ပဲ ”ကိုသိန်းတန်…ကိုသိန်းတန်..စိုး ပေါ် သင်္ဘောကြီး တက်လာပြီ..” အဲလေ ဟုတ်ပေါင် ယောင်လို့…
”အသီးတစ်ရာ အညှာတစ်ခု” ပါရှင်။
Posted by မဟာဆန် at 7:35 PM
I like this song. Thanks for that.
nice song. I also like it.
အရမ်းကို အတ္ဂေးကောင်းတဲ့ အစ်မရေ..
အော်..ဘယ်မဟောင်းနိုင်တဲ့ ဂီတလေးနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားလိုက်တာ..အစ်မကိုပဲရ္ဂာသူကြီး ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်...
သတိတရရှိတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် မဟာဆန်၊
ဘလော့ဂ်ရွာလေးမှာ နေရာလွတ်ရှိသေးလားဟင် ??
တဲကလေးထိုးပြီး နေချင်လို့း)
ဟာာ မိုက်တယ်ကွာ... လန်းတယ်..အိုင်ဒီရာလေးကလဲ ကောင်းလိုက်တာ...
မက်မက်တီတီလို့ မပြောရဘူး ...ဟွန့်.. မက်မက်ကိုလဲ သင်ပေးရမယ်နော်... :)
နာမည်လေး ပါလို့ ၀မ်းသာပါတယ် တီတီရေ...
အာဝါးးအကြီးကြီး အမြှောက်တစ်သိန်း ပေးခဲ့တယ်..နော်...အာဝါးးးးးးးးးးးးးးးးး :P
မမနော် ပြောတော့ မေလေးကိုချစ်တယ် ဆိုပြီး မေလေးအိမ်လဲပါဘူးး
5 ခေါက်ပြန်ရှာတယ်။ မတွေ့လို့စိတ်ကောက်ပြိး ပြန်ပြီ။
ဟားးးးးးး ဟားးးးးးးး မိုက်တယ်ဗျ.... Idea လေးက ရေရေလယ်လယ် လန်းတယ်...... ကျွန်တော့် မြန်မာလို pen name က အညတရတဲ့..... ညဖစ်နိုင်ရင် ပြင်ပေးပါ့လား.... ပိုပြီး ရွာလေးနဲ့ တူသွားအောင်လို့လေ... ကြိုက်တယ်ဗျို့.....
ကိုပြတိုက်ရေ..နာမည်ပြင်ပေးမယ်နော်။ မေလေးရေ..မေလေးရဲ့ အိမ်က ဆောက်တုန်းလေ။ ဘာအရောင်လေးကြိုက်လဲ။ ပြော လှလှလေး ဆောက်ပေးမယ်နော်။ စိတ်ဆိုးနဲ့..အာဝါး.....။ အိမ်အသစ်တွေ ထပ်ဆောက်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရွာက လူတွေအများကြီး ပါဦးမှာ.
ဆန်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးလေးမို့လို့ ချီးကျူးမိပါတယ်။ လုပ်တတ်တာကိုလည်း အံသြမိသေးတယ်။